Diyaaradihiii qaadka Kenya oo soo caga dhigtay Garoonka Aadan Cadde – STAR FM SOMALIA
Diyaaradihiii qaadka Kenya oo soo caga dhigtay Garoonka Aadan Cadde
Waxaa goor dhaweyd soo gaaray Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan (Aadan Cadde) Diyaarado sida qaad, kuwaasi oo ka yimid dalka Kenya.
Qaar ka mid ah Shaqaalaha ka howlgala Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ayaa inay timid diyaarad weyn oo sida qaad fara badan, taasi oo laga keenay dalka Kenya.
Arintaan ayaa ka dambeysay, kadib markii Dowladaha Somaliya iyo Kenya ay wada hadal shalay ka yeesheen sidii dib loogu fasaxi lahaa qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya oo muddo 8 cisho ah hakad ku jiray.
Diyaarada soo caga dhigatay ayaa sida qaad fara badan, waxaana durbadiiba lagu bilaabay in qaadkaasi laga dejiyo oo sidii caadada aheyd loo soo daabulo Magaalada gudaheeda.
Ganacsatada qaadka ayaa soo dhaweeyay in dib loo furo Diyaaradihii ka imaan jiray dalka Kenya ee qaadka keeni jiray, maadaama noloshooda ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga qaadka.
Dowladda Kenya ayaa saameyn ballaaran wuxuu ku yeeshay qaadkii Dowladda Somaliya ay hakisay maalmihii la soo dhaafay, maadaama Kenya lacago fara badan ay ka hesho ka ganacsiga qaadka.
Uganda oo sheegtay in ciidankeeda ay kala baxeyso Somaliya
Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo dib loo furay Maanta